Soul mate futhi
トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Soul mate futhi
Ngicabanga ukuthi abantu baba nomuzwa wokuthi "lo muntu ukuba beze kahle Ukuba," "into engenamsebenzi lena akuyona umuntu"?
njengoba enjalo, abantu bokuba khona Yorisoeru kungani kahle ekupheleni, ungase soul mate. A soul mate, yilokhu likhona ezihlukahlukene ubudlelwano ezifana abathandi nabangane.
Sizalwa ukufa, siphinde kaninginingi umjikelezo ukuthi futhi kabusha. Kuleso umjikelezo, obizwa nangokuthi umuntu ezijulile nge ozithola onqenqemeni uxhumana soul mate izikhathi eziningi. Emjikelezweni, okuyinto Kusolwa ukuhlangabezana ngokwemvelo isikhathi kufanele ukuhlangabezana, thina isikhathi ngasinye baye bakha ubuhlobo obuseduze naye. Umngane womshado umphefumulo, ezixhunywe ngomphefumulo ngaphesheya like
ubuntu, kumele uzizwe njalo okuthile okuhlukile kusukela kwabanye abantu. Ngo
isici umphefumulo mate
, yini ingabe wayezokwazi ukukwenza lokho? Isici kumngane womshado umphefumulo.
? izikhathi eziningi
esidlule ukuphila okuzinzile futhi ukuba ndawonye bathuka umhlangano, ngoba abantu abaye bachitha esifanayo, noma ngabe ukuqomisana wahlangana manje, ungachitha ngasizathu simbe ezolile. Kungoba zixhunywe ukuzethemba okukhulu komunye nomunye, ngikhumbula umqondo ingqondo elizolisayo.
? Ngisho nangaphambi njengoba kwaba
soul mate kanti umhlangano wabo wokuqala ukuthi nginomuzwa wokuthi kukhona endaweni ethile, oyikhumbulayo bazizwa nostalgic ezifana sahlangana endaweni ethile. Futhi, kubonakala sengathi ufuna ukuba ngokwemvelo nabo. Lena, lithi ubufakazi nomunye ezingeni umphefumulo nomunye bakhangwa.
? ku nenzuzo nokulahlekelwa uya ukujola Tsukiaeru
abantu in the ngikwazi ukuqala, yilokhu kuba alisho lutho olutheni ukuthi bangahlanganyela ngaphandle kokucabangela ukulahlekelwa kanye inzuzo. Kodwa umngane umphefumulo, ngisho ngaphandle kubandakanya noma iyiphi ukubala, ezifana nenzuzo nokulahlekelwa, sizalwa nomuzwa wokuthi ufuna ukwenza okuthile enye inhlangano.
? umlingani ngandlela-thile kubonakala
ngokuvamile okungukuthi, futhi kufanele abanaye amazwi ocabanga enye inhlangano Kuvame hhayi amthethise ukuba, kuthatha isikhathi esiningi ukuze abe njengoba kungabonakala isimo sobuso, ukusebenzelana sengqondo. Nokho, ngisho ngaphandle amagama kanye neminye imininingwane umngane umphefumulo, ungakwazi Ukwahlulela ngandlela-thile imizwa.
ngoba, izingxenye ezivamile ngokuvamile
le izingxenye ezivamile akukuphela ingxenye yobuntu ezifana nokuziphatha. Ngokwesibonelo, edolobheni nezindawo ozithandayo, kuze kube yileso isakhiwo into nomkhaya ube, ingenye izici mate umphefumulo ukuthi kukhona izingxenye eziningi ezifanayo abazithandayo.
kuhlangabezana mate umphefumulo?
yilokhu nomunye bakhangwa uhlobo kanye soul mate, kodwa kukhona kukhona isidingo ukuhlangabezana kuyinto. Ngoba lapho uhlangana mate umphefumulo, ungasho yini ukuthi ngokuvamile kuba lonke mlando iphuzu turning zokuphila kwami. Lapho uzama Susumo esinyathelweni esilandelayo, ezifana inqubo yokukhula, kuyinto ukuthi kahle nazo uma bezama Fumo ukuphila.
Ngakho-ke, ukuze bahlangabezane mate umphefumulo, kuqala luthuthukisa ukuphila kwakhe omuhle, futhi ukuhlangana nabantu Asizame lokho isikhathi ngasinye ukwazisa.
, Kuyinto ukuthi kahle nazo uma bezama Fumo ukuphila.